हीटर चलिरहेको पानी: प्रकार र विशेषताहरु
अक्सर सार्वजनिक उपयोगिता मा पाइन्छन्, र अभाव नेतृत्व भन्ने समस्या तातो पानी, हामीलाई पानी-ताप उपकरण किन्न बढावा। र बयलर लागि स्थान, हीटर चलिरहेको पानी खोज्न हुनेछ भने - एक कम्प्याक्ट उपकरण (केही मोडेल पनि लघु सकिन्छ)। यस्तो उपकरणको लागि, तपाईं पनि सानो ठाउँ ठाउँ पाउन सक्छन्। मुख्य फाइदा तात्कालिक पानी हीटर आफ्नो सानो आकार र पानी असीमित रकम को तीव्र ताप छ। तुरुन्तै उपकरण खोल्दै पछि उत्पादन न्यानो वा तातो पानी प्राप्त गर्न: यो साँच्चै सुविधाजनक छ।
पानी चलिरहेको हीटर को प्रकार
ताप तत्व को प्रकार द्वारा, यी उपकरणहरू ग्याँस वा बिजुली हो। हीटर, चलिरहेको पानी ग्याँस मा चलिरहेको - सबैभन्दा आर्थिक विकल्प: ग्याँस बिजुली भन्दा कम लागत। र माथिको प्रकार को समुच्चय मा ताप दक्षता: जल छ गरम ग्याँस बर्नर ट्यूब-एक्सचेंजर, मा गरम छ। वर्तमान मोडेल ग्याँस स्तम्भहरू को विद्युत ज्वलन समारोह छ, र धेरै आउटलेट मा पानी को तापमान खडा गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं प्रवाह माध्यम प्रयोग गर्ने अभिप्राय भने यो उपयोगी छ पानी तताउने को शवर लागि। सुरक्षाको लागि, एक समारोह "GazKontrol" छ: ग्याँस हीटर को हानि स्वतः बन्द छ संग। पानी को तापमान अनुगमन सेन्सर पनि हो: यो उम्लनेबिन्दु नजिक छ भने, ज्वाला निभाउँछ, स्तम्भ Operable छ।
बहने पानी हीटर , बिजुली लामो र राम्रो कटेज र देश घरहरू मा, अपार्टमेन्ट मा, जहाँ कुनै प्राकृतिक ग्याँस छ "तल बसे"। अक्सर, तिनीहरूले शक्ति धेरै छ, त्यसैले तपाईं तुरुन्तै पानी ठूलो मात्रा गर्मी गर्न सक्नुहुन्छ। तर शक्ति धेरै छुट्टै शक्ति लाइन लागि आवश्यकता निम्त्याउँछ (यसलाई पहिले प्रदान गरिएको छैन भने गरिएको)। निजी रेखा - सुरक्षा को एक ग्यारेन्टी, र यो आवश्यकता बेवास्ता गर्न आवश्यक छैन। यसबाहेक, यदि शक्ति 10kW नाघ्यो, तीन-चरण शक्ति स्रोत को आपूर्ति आवश्यक छ। यदि यो समस्या छ - एक कम शक्तिशाली मोडेल चयन गर्नुहोस्।
उपकरण बिजुली तात्कालिक पानी तताउने
यस प्रकारका पानी ताप उपकरण वा हीटर हेलिक्स मा राखिएको छ जो एक फ्लास्क हुन्छ। तपाईं हार्ड छ पानी भने, यो एक सर्पिल एक हीटर चलिरहेको पानी चयन गर्न उचित छ: ताप तत्व को डिजाइन एकदम उपकरणको जीवनकालमा विस्तार जो मात्रा को गठन, रोक्न। अधिकतम तापक्रम - 55-57 ° C, यो नुहाउनु वा माझ पर्याप्त छ।
हीटर गर्न मूल्य पानी प्रवाह यसको क्षमता, निर्माता, र विनिर्देशों मा निर्भर गर्दछ। सबैभन्दा बजेट संस्करण $ 45-50 लागि खरिद गर्न सकिन्छ। तर यसको जीवन (पनि सामान्य सञ्चालन अवस्थामा) दुई वर्ष भन्दा बढी छैन। मूल्यहरु वृद्धि र धीरज वृद्धि संग। त्यहाँ डलर हजारौं खर्च जो मोडेल छन्, तर यी मोडेल शुद्धता को एक धेरै उच्च डिग्री संग पानी को तापमान नियन्त्रण जो एक निर्मित माइक्रो कम्प्यूटर, छ।
Linear दीपक - आधुनिक भित्री लागि स्टाइलिश समाधान
दीपक एलईडी सडक प्रकाश: विवरण र फोटो
संकीर्ण वाशिंग मिसिन: एक अवलोकन, सुविधाहरू, विशेषताहरु, प्रकार, निर्माता र समीक्षा
सिलिकन टास्ने: एक संक्षिप्त विवरण
वृद्धि संरक्षक "ऊर्जा": लोकप्रिय मोडेल को लाभ
दबाइ "Betargin" बच्चाहरु निर्देशन, contraindications, साइड इफेक्ट
ककटेल कसरी मिश्रण गर्ने "लङ्ग आइल्याण्ड"
"Neva पर्ल" - सेन्ट पीटर्सबर्ग मा रेस्टुरा। वेबसाइट, फोटो, समीक्षा
यो WhatsApp के मतलब एक निशान छ, र त्यो - दुई?
कि करङहरु अन्तर्गत र बायाँ छ त्यहाँ बिरामी हुन सक्छ?
Mallika Sherawat - भारतीय सिनेमा को बेजोड सेक्स प्रतीक, अग्रणी भूमिका खेलेका
विद्युत आपूर्ति एकाइ Chieftec GPA-500S: समीक्षा, समीक्षा
वोदका "kasenka" - मादक पेय को रूस नयाँ नेता
पदक "faultless सेवाको लागि"। रक्षा को सोभियत संघ मंत्रालय को विभागीय पदक